Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPad in Computer
> Resource > iPad > Si fudud Bedelka Photos ka iPad in Computer
Waxaan leeyahay 5GB sawirro on my iPad taas oo ay jirto gurmad lahayn. Markii hore waxaan kuwaas photos in iPad u guuriyeen ka PC ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan si qalad ah formatted drive halkaas oo sawiro ah ay ku kaydsan kombuutarka. Oo anigu waxaan isku daynay in aan soo guusha. Ma jiraa hab loo wareejiyo ka iPad in ay PC isticmaalaya ah app, siyaada, ama Galaydh? Sida iska cad, la siiyey tirada iyo baaxadda faylasha, iyaga email ma aha xal la aqbali karo. Thanks ka hor.
Ma aan helin xal u sawiro ka iPad gudbaayo computer? Ha ka welwelin. Waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare (Windows). Waa tababare xirfad iPad photos kaas oo loogu talagalay in aad nuqulka aad sawiro iPad in computer si aad iyaga ka arki kartaa ama u wadaagno si xor ah. Marka laga reebo sawiro dayanayaan in computer ka iPad, codsigan ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay dajiyaan sawirada kombiyuutar si ay iPad iyo abuuro iyaga badbaadiya albums.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay iMac ah, MacBook Pro ama MacBook Air, download TunesGo Wondershare (Mac) in aad nuqulka sawiro ka iPad in aad Mac.
Sawiro ka iPad dhaqaaq computer in 2 tallaabooyinka
In ay qayb ka socda, ha i idin tusin edbinta -by-tallaabo tallaabo ku saabsan sida ay u gudbiyaan sawirro iPad nidaamka computer runing Windows ka hawlgala.
Si aad u billowdo la, aan bilowno TunesGo kombiyuutarka ka dib markii ay ku rakibidda. Isticmaal cable USB soo socda aad iPad in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka. Marka aan sidaa yeelno, aad iPad dhowaan la aqoonsan doono.
Lugood loo baahan yahay si loo soo dajiyo kombiyuutarka, si loo hubiyo in TunesGo Wondershare u shaqeeyo.
Tallaabada 2. nidaameed sawiro ka iPad in computer
Guji "Sawirro" tab geedka buugga bidix. Ka dib markii in, ka dooro sawiro ama albums. Guji "Dhoofinta in". Markaas, dooro Jid badbaadin xafido albums dhoofiyo ama sawiro. Ha illoobin in aad iPad mar walba ku xiran inta lagu jiro hanaanka wareejinta.
Wondershare TunesGo taageertaa daydo iPad ku salaysan arrimo 5/6/7, sida iPad bandhigay isha, iPad mini iyo iPad 2. iibsiga sawir soconaysaa hal ama laba daqiiqo. Markaas, oo dhan photos doonayo in lagu soo guuriyeen doonaa si aad u computer. Hadda, waa inaad sidoo kale iyaga ku eegaan ama iyaga la wadaagi awoodi doonaan.
Video ku saabsan sida loo sawiro ka iPad wareejiyo computer
Waxaa laga yaabaa inaad danaynaysaa in aad ka n
Sida loo Delete Photos / Album ka iPad / iPad mini